အပေါင်းအသင်းများနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခြင်းက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်မှုကို မြင့်တက်စေ by popolay.com
ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စင်း နိုင်ငံမှားပြီး ဆင်းသက်
ဇနီးသည်နဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး လေယာဉ်နဲ့ တိုက်သတ်သူ လေယာဉ်မှူးသေဆုံး (ရုပ်သံ)
လစာရဲ့ ၈၀% ကို လစဉ်လှူဒါန်းတဲ့ကျောင်းဆရာ ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာကျောင်းဆရာဆု ရရှိ
အဝီစိတွင်းထဲ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်သားလေး နှစ်ရက်အကြာ အသက်ရှင်လျှက်ပြန်ဆယ်
ရဟန်းခံရှင်ပြုပွဲတွင် ဆင် လန့်ပြီး လူတွေကို အန္တရာယ်ပြုသဖြင့် ၄ ဦးဒဏ်ရာရ (ရုပ်သံ)
ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဗုန်းခိုကျင်းအောင်းသူ ၆ ဦးသေဆုံး
အိမ်ရှေ့မှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လုပ်နေတာ မကျေနပ်လို့ အိမ်ထိလိုက်သွားပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်
လင်မယားနှစ်ဦး စကားများရာမှ ဖခင်ကို တမိသားစုလုံးက ဝိုင်းသတ်ပြီး အလောင်းဖျောက်
မလေးရှားတွင် နဂါးနှင့်ဆင်တူသော ဒဏ္ဍာရီလာ မကောင်းဆိုးရွားတွေ့ရှိ (ရုပ်သံ)
အနှိပ်သည်ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ တစ်သက်လုံး ဒုက္ခိတဘဝရောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (ရုပ်သံ)
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဘီယာတွဲသောက်နေတဲ့ ခင်ပွန်းကို ဇနီးသည်က ဆိုင်ထဲဝင်ရိုက် (ရုပ်သံ)
မနာလိုစိတ်နဲ့ ၃ ပတ်အရွယ် သမီးလေးကို မိခင်ကိုယ်တိုင် လည်လှီးသတ်
ကလေးတို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့အတွက် မိဘများက ပြုမှုဆောင်ရွတ်ပေးသင့်တဲ့ အချက်များ
ကိုလာသောက်ပြီး တစ်နာရီအကြာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ..?
သင့်ကို နေ့စဉ် ဖြည်းဖြည်းချင်း မျှင်းသတ်နေတဲ့အရာ (၁၀) ခု
ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ဘီလျံနာဖြစ်လာတဲ့ Kylie Jenner
အွန်လိုင်းမှာခေတ်စားနေတဲ့ မြန်မာငွေ ၆ သိန်းကျော်တန်တဲ့ ဖက်ရှင်နားကပ်
အဘိုးအိုကြီးတစ်ယောက်လို မမှတ်မိနိုင်အောင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဆိုတော်ဝိုင်ဝိုင်း
အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး သရုပ်ဆောင်မှ အကယ်ဒမီပေးတာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ မင်းဦး
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ BTS Army Fan Group တို့ကို မှား hack မိတဲ့ ဘင်္ဂါလီဟက်ကာများ
အကယ်ဒမီပေးပွဲအပြီးကိုကိုတို့ဝန်းရံကြရမယ့် ဦးဝင်းမြိုင်ရဲ့သမီးလေး အိပြည့်
မွန်တီနီဂရိုးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားခံခဲ့ရတဲ့ ဟက်ဆန်အိုဒွိုင်း
ဂျပန်အသင်းကို ပေးဂိုးမရှိဘဲ ရလဒ်ကောင်းရရှိအောင် စွမ်းဆာင်သွားမည့်ဆိုတဲ့ ဟိန်းထက်အောင်
မြောင်တောင်ယူနိုက်တက်မှာ ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက် သွင်းဂိုးတွေနဲ့ သက်သေပြဖို့ လိုနေပြီဖြစ်တဲ့ အောင်သူ
အေဂျက်ဇ် အသင်းနဲ့ ပွဲအမှီ ရော်နယ်ဒို ကို ပြန်လည်သက်သာလာဖို့ မျော်လင့်နေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်
MMA ကစားသမား “ကော်နာမက်ဂရက်ကာ” ကို လက်ကိုင်ဖုန်း ခိုးယူမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး
ပထမအချီမှာတင် ပွဲသိမ်းအနိုင်ယူပြီး ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာကိုခံယူမည့် “တီရယ်လ်ထန်”
နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ “ဖိုးသော်”
အပေါင်းအသင်းများနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခြင်းက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်မှုကို မြင့်တက်စေ
20 Mar 2018 2,257 Views
ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ အဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီး တစ်ဦးတည်းနေထိုင်နေခြင်းကလည်း နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်တက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အဓိကအချက် တစ်ချက်အဖြစ် အပါအဝင်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်ဟာ အသက် ၄၀ နားနီးလာပြီ ဒါမှမဟုတ် ၄၀ ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ နှလုံးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ အကြောင်းတရားတွေကို ကြိုတင်သိရှိပြီး စတင်လိုက်နာဆင်ခြင်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့ သတိပြုမိလိုက်ပါ။
နှလုံးကိုအဓိက ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ သွေးတိုးတာ၊ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောမြင့်တာ၊ အဝလွန်တာ၊ ဆီးချိုတို့က ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေအားလုံးဟာ အသက် ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင်နား ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်း မြင့်မားလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက် ၄၀ နား နီးပြီဆိုရင် နှလုံးနဲ့ပက်သက်တဲ့ရောဂါတွေ မခံစားရအောင် ဖော်ပြပါ အချက်(၆)ချက်ကို စတင်လိုက်နာဖို့ လိုပါပြီ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ထိပ်ဆုံးကနေ ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေအားလုံးနီးပါး ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့အခါ လုံးဝ ဆေးလိပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ထိကို အနည်းဆုံး ၇ ကြိမ်ကနေ ၁၀ ကြိမ်လောက်ထိ ဖြတ်လိုက်သောက်လိုက် ဖြစ်နေတတ်တယ်လို့ သုတေသနစစ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။ ဒါက ဖြတ်ရခက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောကိုဆောင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ကို ရှောင်ကျဉ်လိုက်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်တစ်ချက်ကို ကျော်လွှားလိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မသင့်တော်တဲ့ အစားအစာများ စားသုံးခြင်း ရှောင်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် တက်လာခြင်းကလည်း နှလုံးရောဂါဖြစ်ဖို့ လမ်းစတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အစာချေဖျက်နိုင်မှု စွမ်းအားဟာ အသက် ၄၀ နားနီးလာတာနဲ့ အားနည်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အစားအစာကို ကိုယ်အလေးချိန် မတက်လာအောင် ချင့်ချိန်စာသုံးဖို့ လိုလာပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံဟာ မည်သည့်အသက်အရွယ်နဲ့မဆို သင့်တော်ပါတယ်၊ အသက်ကြီးလာလေ ပို၍ပို၍ အရေးကြီးလာလေပါပဲ။
“အစာချေဖျက်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်က ကျလာပြီဆိုတော့ အကယ်၍ ကိုယ်က အရင်တုန်းကလိုပဲ စားနေကြသောက်နေကြ ပုံစံအတိုင်း စားသောက်နေမယ်ဆိုရင်တောင် ဝိတ်ကတက်လာမှာ အသေအချာပဲ” လို့ ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းက ပရော်ဖက်ဆာ Dr.Deepak Bhatt က ပြောပါတယ်။
၃။ အစားအသောက်ကို ဝေပုံကျစနစ်ဖြင့်စားပါ
ကိုယ်အလေးချိန်မတက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက အစားအသောက်ကို ဝေပုံကျလေးနဲ့ စားသုံးဖို့ပါ။ အဟာရဗေဒပညာရှင်ရဲ့ ထောက်ခံချက်အရ ပရိုတိန်းပါတဲ့ အစားအစာတွေကို လက်သီးဆုပ် အရွယ်၊ ဂျုံစပါး အစားအစာတွေကို တင်းနစ်ဘောလုံးအရွယ်ခန့်၊ အသီးအရွက်စိမ်းများကို ဘေ့စ်ဘောအရွယ်ခန့်၊ ထောပတ်နဲ့ သံလွင်ဆီစာသုံးမှုကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် စားသုံးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အစားအစာစားတဲ့အခါမှာလည်း တရစပ်အများကြီးမစားပဲ ပုံမှန်အချိုးညီမျှစွာ စားသောက်ပြီးနောက် တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါ၊ ဒါကိုမှ ဗိုက်ကဆာနေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ ကယ်လိုရီ နည်းနည်းပဲပါတဲ့ သစ်သီးတွေကို ထပ်ဖြည့်စားသုံးပါ။
၄။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း (သို့) ပြင်းထန်စွာလုပ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်အနေအထားလောက် မှန်မှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် နှလုံးက ပိုမိုသန်မာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုံးဝမလုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်စွာ လုပ်ခြင်းတို့ကတော့ နှလုံးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက် တစ်ပတ်လျှင် သုံးလေးကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
သုတေသနပညာရှင်တွေက အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ရတဲ့ ဘားတန်းခိုခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက နှလုံးကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းနဲ့ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ ပိုသိသာကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ပိုပြီးဆိုးရွားစေပါတယ်။
အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ သွေးပူအောင် အချိန်နည်းနည်းပဲလိုပေမယ့် အသက် ၄၀ ကျော်လာရင်တော့ အားကစားမလုပ်မီ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကို ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်လောက်ထိ လုပ်ဖို့လိုသလို လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း သွေးအေးအောင် အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေအားလုံးကို ရှောင်ရှားပါ
လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတတ်တာမို့ သင့်ရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးက ရှောင်လွဲမရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သင်ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အပေါ် မှုတည်နေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျနိုင်အောင် မလုပ်နိုင်ဖူးဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ သင့်ရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမှာပါ။ တရားထိုင်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေအပေါ် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းတွေနဲ့ ကုစားနိုင်ပါတယ်။
၆။ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ အဆက်ဖြတ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ
သုတေတသန စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်အရ အထီးကျန်ခြင်း၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းကွာခြင်းတို့ကလည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလိုပဲ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနဲ့ အဆက်ဖြတ်ထားသူတစ်ယောက်ဟာ နှလုံးနဲ့ပက်သက်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ၂၉% ပိုမြင့်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အချို့၏ သုံးသပ်ချက်အရ မိသားစုတွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အတူရှိနေခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ချနိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ အဓိကကျတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်ရောက်လာပြီဆိုရင် ဖော်ပြပါအချက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာရင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဘဝကိုတန်းဖိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ..။
ဆီးစစ်တံမရှိပဲ ကိုယ်ဝန် ရှိ/မရှိ အဖြေမှန်ရအောင် ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ..?
တန်ဖိုးမြင့်ကားများတင်ဆောင်လာသော ကားသင်္ဘော မီးလောင်နစ်မြုတ် (ရုပ်သံ)
မိခင်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ၁၁ လသား ကလေး ဆူပွက်နေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲပြုတ်ကျ
မနေ့ညက The Voice အစီစဉ်မှာ ပြောစမတ်တွင် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ “ကျားပေါက်”
အကယ်ဒမီပွဲကို သိန်း ၅၀၀၀ တန်စိန်လက်စွပ်ဝတ်ပြီး ထူးခြားစွာတက်ရောက်မယ်လို့ ကျော်ကျော်နန္ဒပြော